शरीरमा हुने गाँठागुँठी हड्डीको क्यान्सर हुन सक्छ | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता शरीरमा हुने गाँठागुँठी हड्डीको क्यान्सर हुन सक्छ
on: २० पुष २०७५, शुक्रबार ०७:५५ अन्तरवार्ता
शरीरमा हुने गाँठागुँठी हड्डीको क्यान्सर हुन सक्छ
डा. नूर प्रजापति, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल
एक सय क्यान्सर बिरामीमध्ये १ जनामा हड्डीको क्यान्सर हुने गर्छ । यसलाई अस्थियो सार्कोमा भनिन्छ । यो हड्डीमा मात्र देखिन सक्छ । हड्डी र मासुबाटै उत्पत्ति हुने क्यान्सरलाई सार्कोमा भनिन्छ । यसका साथै शरीरका अन्य भागमा रहेको क्यान्सर फैलिएर पनि हड्डीमा क्यान्सर हुन सक्छ । विशेष गरी सार्कोमा बालबालिका र युवामा देखिने गरेको छ । यो क्यान्सर घुँडा, कुहिनु, काँधको वरपरको भागमा हुन सक्छ । बुढेसकालमा पनि यो रोग देखिन सक्छ । यो क्यान्सर महिलाको तुलनामा पुरुषमा धेरै हुने गरेको पाइएको छ । प्रस्तुत छ, हड्डीमा हुने क्यान्सर सार्कोमाका बारेमा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका डा.नूर प्रजापतिसँग आर्थिक अभियानका पूर्णभक्त दुवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सार्कोमा भएपछि शरीर दुख्छ कि दुख्दैन ?
सार्कोमा भएपछि शरीर दुखिहाल्दैन । धेरैजसो बिरामी मासु सुनिएर र गाँठागु“ठी आएर उपचार गर्न आएका हुन्छनन् । अस्पतालमा आउने बिरामीमा दुखाइ भएर आउनेभन्दा सुन्निएर आउने बढी हुन्छन् । खासगरी ढाड, खुट्टा, हात सुन्निएर आउँछन् । हड्डीभित्रै ट्युमर भयो र हड्डी नै भाँचिसकेको छ भने मात्र दुख्छ । शरीरका विभिन्न ठाउँमा नयाँ डल्लो आउन थालेको छ, पुरानो डल्लो बढ्न थालेको छ र दुख्न थालेको छ भने क्यान्सरको भएको हुन सक्छ । हड्डी दुख्यो भने क्यान्सरको पहिचान गर्न एक्सरे, एमआरआई, बायोप्सी गरिन्छ ।
सार्कोमा हुन नदिन के गर्नुपर्छ ?
सार्कोमालाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । यो किन लाग्छ भन्नै सकिँदैन । यसको कारण अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन । अरू क्यान्सर हुन नदिन प्रयास गर्न सकिन्छ । तर, सार्कोमालाई रोक्न सकिँदैन । आँखामा लाग्ने रेटिनोब्लास्टोमा भएको भए पनि हड्डीको क्यान्सर हुन सक्छ ।
यो रोगका लक्षण केके हुन् ?
शरीरका विभिन्न भागमा गाँठागुँठी आउने र सबैभन्दा सामान्य लक्षण हड्डी दुख्नु हो । शुरूमा काम गर्दा वा राति हड्डी धेरै दुखेको महसूस हुन्छ । यो बढ्दै जाँदा यसका अन्य लक्षण देखिन्छन् । हड्डी कडा हुने र मासु सुन्निने हुन्छ । ज्वरो आउने, तौल कम हुने, भोक नलाग्ने वा रातिको समयमा पसिना आउने हुन्छ । यसैगरी वाक्वाक् लाग्ने, रगतमा कमी हुने, रिंगटा लाग्ने हुन सक्छ । शरीरका विभिन्न भागमा गाँठागु“ठी र गिर्खा देखिन थाल्छ । कहिलेकाँही ट्युमरमा गिर्खा हुने सम्भावना पनि हुन्छ । गिर्खा र गाँठागुँठी धेरैजसो दुखाइरहित हुन्छ । हड्डी भाँचियो भने मात्र दुख्छ । गिर्खा छिटोछिटो बढ्यो र नयाँ गिर्खा ठूलो हुँदै गयो भने हड्डीको क्यान्सर भएको आशंका गर्नुपर्छ ।
यस्तो लक्षण देखिएमा के गर्ने त ?
समयमा चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ । चिकित्सकले शुरूमा एक्सरे गरेर हेर्छन् । एक्सरेमा हेर्दा असामान्य भयो भने एमआरआई गर्नुपर्ने हुन्छ । एमआरआई गरिसकेपछि क्यान्सरको सम्भावना देखियो भने बायोप्सी गर्नुपर्ने हुन्छ । जुनसुकै गाँठागुँठीको बायोप्सी गर्नु पर्दैन । गाँठागुँठी ५ सेमीभन्दा ठूलो भयो भने मात्र सार्कोमा भएको हुन सक्छ । साना गाँठागुँठीको पनि राम्रो परीक्षण नगरी काटेर फाल्नु हुँदैन । कतिजना धनको पोका आएको भनेर ठूलो भइसक्दा पनि परीक्षण नगरी बस्छन् ।
सार्कोमाका अरू लक्षण केके हुन् ?
सार्कोमा हुँदा हड्डी दुख्ने समस्या हुन्छ । सार्कोमा खासगरी हात, खुट्टाको हाडमा बढी देखिने रोग हो । त्यसैले शरीरका यी भागमा धेरै दुख्ने सम्भावना हुन्छ । यसैगरी कहिलेकाहीँ हड्डीको क्यान्सरमा ट्युमरको वरपर दुख्ने वा सुन्निने हुन्छ र त्यो ठाउँ नरम हुन्छ । त्यस्तै हड्डीको क्यान्सर हुँदा हड्डी कमजोर हुने भएकाले थोरै चोटपटक लाग्दा पनि हड्डी भाँचिन सक्छ । यदि तपाईंलाई हात वा खुट्टा हल्लाउन वा दायाँबायाँ मोड्न समस्या भइरहेमा सार्कोमा भएको हुनसक्छ । क्यान्सरको सेल बढ्दै गर्दा यस किसिमको समस्या देखिन थाल्छ र पछि यो गम्भीर बन्दै जान्छ । ३५ वर्षको उमेरसम्म पुरानो हड्डी भाँचिनु वा खुस्किनु र नयाँ हड्डीको निर्माण एक सामान्य क्रिया हो । तर, हड्डी छिटोछिटो भाँचिन्छ भने यो अस्टियोपोरोसिस क्यान्सरको लक्षण हुनसक्छ ।
हड्डीको क्यान्सरको उपचार कसरी गरिन्छ ?
अन्य क्यान्सरको उपचारजस्तै हड्डीको क्यान्सर अर्थात् सार्कोमाको पनि उपचार गरिन्छ । धेरैजसो सार्कोमाको उपचार शल्यक्रियाबाट गरिन्छ । हड्डीको क्यान्सर धेरै फैलिएमा, रोगीलाई धेरै समस्या भएमा, हड्डीको क्यान्सर कुनै जोर्नीको वरपर भएमा पनि शल्यचिकित्साको आवश्यकता पर्छ । कहिलेकाहीँ बिरामीको अवस्था गम्भीर भएमा पनि सुरक्षाका दृष्टिले शल्यचिकित्साबाट यसको उपचार गर्नुपर्छ । सर्जरी गर्दा क्यान्सरबाट ग्रस्त भागलाई हटाइन्छ र बाँकी अंगलाई धेरैभन्दा धेरै सुरक्षित राख्ने हरसम्भव प्रयास गरिन्छ । बिरामीको अवस्था धेरै गम्भीर भएमा वा ज्यानै जाने जोखिम भएमा बिरामीलाई बचाउन शरीरको क्यान्सर भएको अंगलाई नै काटिन्छ । सार्कोमा शरीरभर नपैmलियोस् भनेर यस किसिमको शल्यक्रिया गरिन्छ । हातखुट्टा फालेर ज्यान बचाउन सकिन्छ भने हामी त्यस्तो पनि गर्छौं । क्यान्सरको अर्को उपचार पद्धति भनेको किमोथेरापी हो । रगतका माध्यमबाट कोषिकामा क्यान्सर फैलिएमा किमोथेरापी दिइन्छ । यस थेरापीका माध्यमबाट रगतमा रहेको क्यान्सरलाई सीधै नष्ट गर्ने प्रयास गरिन्छ । रेडिएशन थेरापी अर्थात् सेकाइ गर्नु क्यान्सर उपचारको अर्को पद्धति हो । धेरै परिस्थितिमा सार्कोमाको उपचारका रूपमा रेडिएशन थेरापीको पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
हड्डी क्यान्सरको उपचारपछि के गर्नुपर्छ ?
उपचार गरेपछि क्यान्सर हरायो भने पनि ५ वर्षसम्म फलोअप गर्नुपर्छ । ५ वर्षसम्म पनि बल्झिएन भने मात्र ठीक भएको भन्न सकिन्छ । उपचारको २ वर्षसम्म ३–३ महीनामा फलो गर्नुपर्छ । त्यसपछि २ देखि ३ वर्षसम्म ४–४ महीनाको फलो गर्नुपर्छ । ४ र ५ वर्षमा ६–६ महीनाको फलो गरिन्छ । त्यसपछि हरेक वर्ष परीक्षण गर्नुपर्छ । फलो गर्दा मुख्य गरी क्यान्सर फोक्सो र पेटमा फैलिएको छ कि छैन भनेर हेर्छौं । छातीमा फैलिनु धेरै नै खतरा हो । छातीमा देखियो भने केमोथेरापी गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय बिरामी क्यान्सरको चौथो चरणमा मात्र आउँछन् । छाती, मुटुमा क्यान्सर सरिसकेको छ भने दुखाइ कम हुने गरी सजिलो बनाउने काम मात्र गर्छाैं । यदि पहिलो चरणकै क्यान्सर छ भने निको पार्ने उपचार गर्छौं । क्यान्सरको उपचारका लागि टीमवर्क हुन्छ । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालबाहेक अन्य अस्पतालका चिकित्सक बोलाएर पनि उपचार गरेका छौं ।
यो रोग हुन नदिन पूर्वसजगता अपनाउन सकिन्छ ?
शरीरमा गाँठागुँठी भयो भने चिकित्सकककहाँ गएर परीक्षण गराइहाल्नुपर्छ । स्वास्थ्य केन्द्रका चिकित्सकले पनि सीधै गाँठागु“ठी हो भनेर काट्नु हुँदैन । यो क्यान्सर भएको पनि हुन सक्छ । धनको पोका आएको भनेर बसिराख्नु हुँदैन । कसैले शरीरमा ट्युमर पालेर बसेको भने स्वास्थ्य संस्थामा गएर चिकित्सकसँग परीक्षण गराउन प्रेरित गर्नुपर्छ ।
२९ चैत्र २०७५, शुक्रबार ०८:३०
पेट दुख्नु कोलोरेक्टल क्यान्सर हुन सक्छ
१५ चैत्र २०७५, शुक्रबार ०८:३१
शरीरको कुनै पनि अंगमा क्यान्सर हुन सक्छ
१० फाल्गुन २०७५, शुक्रबार ०७:१९
२४ पुष २०७५, मंगलवार १८:५९
आशा लघुवित्तद्वारा शीपमूलक तालीम